BIAFRA: Kedu Aka Ji Nnamdi Kan? N’?l? Mkp?r? Ebe Ob? Na Iwu Obodo Naijiria Ejigh? Ya?
BIAFRA: Kedu Aka Ji Nnamdi Kanụ N’ụlọ Mkpọrọ Ebe Obụ Na Iwu Obodo Naijiria Ejighị Ya?
Kedu aka ji Nnamdi Kanụ n’ụlọ mkpọrọ? Ịmara aka ji ya bụ nwa amadi ga-enyere aka ịmara ụdịrị ekpere anyị ga na-ekpe n’isi ya. Iwu obodo Naijiria ejighị Nnamdi Kanụ. Ọ bụrụ na iwu obodo ji ya, o teela ya bụ nwa amadi kara inwere onwe ya. Anyị akaala ichefu na o nwere mgbe ọ gara ụlọ mkpọrọ ugbu a.
Ọ bụrụ na ọ bụ iwu obodo ji ya, anyị akaghị ị na-ahụ etu esi agbanwe ndị ọkaikpe ukwu ka a ga-asị na ọ bụ panteri nwa agbọghọ. Ọ bụrụ iwu obodo Naijiria ji ya, ọ kaghị ịbụ kwa ọnwa, kwa iwu ọhụrụ a ga-agbakwụnyere ndị ha sị na ọ dara. Iwu obodo Naijiria ejighị ya bụ nwa amadi. Onye ọchịchị obodo, Buhari bụ onye ji ya.
Buhari ji Nnamdi Kanụ. Ganye na ọ hapụrụ ya bụ na ya bụ nwoke ga-enwere onwe ya. Ihe anyị na-ahụ n’ụlọ ikpe bụ ejije. Onye ọka iwu ya nwere ike ibido n’ụtụtụ kpebere ya ọnụ ya, ganye na chi ejie, ihe nile ndị ahụ bụ ka anyị hụ ihe anyị ga-eji were mere isiokwu kwa ọnwa. Onye ọkaikpe ọbụla ji ya bụ ikpe ma alhaji a na-achịrị ehi. Nanị otu ihe ka Buhari chọrọ, nke ahụ bụ ịnapụ Nnamdi Kanụ ndụ ya, nke ahụ sie ike, itukpu ya n’ụlọ mkpọrọ ma tụnye igodo ya n’oshimiri Atụlanta. Ụdị asị Buhari kpọrọ Kanụ bụ ụdị ọ kpọrọ Dasuki na nke dikwaazi ka ọ kpọrọ otu agbụrụ. Ọ bụrụ na ike Chukwu dị ya n’aka, ọ kaara iji aka fijie ya onu, etu esi adokwo ọkụkụ onu.
Aka ji ya abụghị aka ụlọikpe... o teela ụlọikpe kwuru ka o si n’ụlọ mkpọrọ were pụta, mana ọ ka nọ na ya. Ụlọikpe nwaa anwa sị ya naba na ikpe amaghị ya, enwekwara añụrị maka na ọbụghị ụlọikpe ji ya. Ọ ga-aka nọrọ n’ụlọ mkpọrọ ganye na a gbajiri aka ahụ ji ya. Ahụghị m nwereonwe Mazi Nnamdi Kanụ n’ọchịchị Muhammadu Buhari. Ejije ahụ abụghị etu ahụ ka e si were dee ya. Ya were ndụ ya pụta. Nke ahụ bụ ihe kasi mkpa.